Moqups: Drafitra, Drafitra, Prototype, ary iaraha-miasa amin'ny tariby tariby sy ny mockup amin'ny antsipirihany | Martech Zone
Moqups: Drafitra, Volavola, Prototype ary iaraha-miasa amin'ny Wireframes sy ny mockup amin'ny antsipiriany
Talata, Septambra 21, 2021 Talata, Septambra 21, 2021 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo asa tena nahafinaritra sy nahafa-po ahy dia ny niasa ho mpitantana vokatra ho an'ny sehatra SaaS orinasa. Ny olona dia manao ambanin-javatra ny fizotrany takiana mba handaminana tsara, hamolavolana, hanaovana modely ary hiaraha-miasa amin'ireo fanovana kely indrindra an'ny mpampiasa.
Raha te-handrafitra ny endrika kely indrindra na ny fanovana ny interface-n'ny mpampiasa aho dia hanao dinidinika amin'ireo mpampiasa mavesatra ny sehatra amin'ny fomba fampiasan'izy ireo sy ifandraisany amin'ilay sehatra, hanaovana dinidinika ireo mpanjifa ho avy amin'ny fomba hampiasan'izy ireo ilay endrika, hiresahana ireo safidy miaraka amin'ireo ekipa maritrano sy eo aloha- atsaharo ny fahafaha-manao ireo mpamorona, avy eo mamolavola sy mizaha toetra prototypes. Mety maharitra amam-bolana ny fizotrany alohan'ny hamindrana tariby tariby mankany amin'ny famokarana. Raha novolavolaina dia tsy maintsy nokasihiko koa ny pikantsary ho an'ny tahirin-kevitra sy ny varotra vokatra.
Ny fananana sehatra iray hampivelarana, hizarana ary hiaraha-miasa amin'ny fanesoana dia tena nanakiana. Enga anie isika hanana sehatra izay mora sy malefaka tahaka Moqups. Miaraka amin'ny fitaovana fanesoana an-tserasera sy tariby toy ny Moqups, afaka:
Hanafaingana ny fizotranao amin'ny famoronana - Miasa ao anatin'ny tontolon'ny famoronana tokana mba hitazomana ny fifantohan'ny ekipanao sy ny tanjany.
Ampidiro ny mpiombonantoka rehetra - Mpitantana vokatra, mpandinika momba ny asa, Mpanamboatra rafitra, mpamolavola ary mpamolavola - manangana marimaritra iraisana ary mifampiresaka mazava.
Miasa lavitra amin'ny rahona - amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fitaovana rehetra - tsy misy olana amin'ny fampidirana sy fisintomana rakitra.
Andao hanao fitsidihana haingana an'i Moqups.
Volavola - Alao sary an-tsaina ny hevitrao
Alao sary an-tsaina, izahao toetra ary hamarino ny hevitrao amin'ny alàlan'ny tariby haingana sy fanesoana amin'ny antsipiriany. Moqups ahafahan'ny orinasanao mitrandraka sy miverimberina eo am-pananganana momentum ny ekipanao - mivezivezy milamina avy eo amin'ny lo-fi mankany hi-fi rehefa mivoatra ny tetikasanao.
Drafitra - Ampifanaraho ny hevitrao
Alao ny foto-kevitra ary omeo lalana ny tetikasanao amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaovana sary matihanina. Moqups ahafahanao mamorona sitemap, tabilao, tabilao - ary mitsambikimbikina mora foana eo anelanelan'ny sary sy ny endriny hitazomana ny asanao.
Prototype - Asehoy ny tetikasanao
Mamorona prototype mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fifandraisana eo amin'ny volanao. Moqups mamela ny mpampiasa hanahaka ny zava-niainan'ny mpampiasa, hanala ny takiana miafina, hahita faran'ny maty ary hahazo fisoratana anarana farany amin'ireo mpandray anjara rehetra alohan'ny hampiasam-bola amin'ny fampandrosoana.
Fiaraha-miasa - Mifandraisa amin'ny fotoana tena izy
Tazomy amin'ny pejy iray ihany ny olon-drehetra, manome valiny isaky ny dingana famolavolana. Henoy ny feo rehetra, diniho ny safidy rehetra - ary atsangano ny marimaritra iraisana - amin'ny alàlan'ny fanitsiana amin'ny fotoana tena izy ary fanehoan-kevitra mivantana momba ireo volavola.
Moqups dia manana ekosistema feno fitaovana ao anatin'ny tontolo famolavolana tokana, ao anatin'izany:
Sintomy sy atsofohy ireo singa - Haingam-pandeha sy haingana avy amin'ny tranomboky feno widgets sy endrika mahira-tsaina.
Stencil efa vonona hampiasa - Safidio avy amin'ny karazana stencil kit ho an'ny fampiharana finday sy tranonkala - ao anatin'izany ny iOS, Android, ary Bootstrap.
Tranon-tahiry Ikona - Trano famakiam-boky namboarina miaraka amina Icon Sets an'arivony malaza, na misafidy amin'ny Font Awesome, Material Design, ary Hawcons.
Manafatra sary - Ampidino ny volavola efa vonona, ary avadiho haingana ho prototypes iraisana.
Fanovana zavatra - Ovao ny habe, ahodino, ampifanaraho ary asio endrika zavatra - na ovao ny zavatra sy vondrona maro - miaraka amin'ny fitaovana marani-tsaina sy mavitrika. Manova be, manova anarana, manidy ary singa vondrona. Esory na avereno amin'ny sehatra maro. Fantaro haingana ny zavatra, mivezivezy amin'ireo vondrona miforitra, ary ahita ny fahitana - izany rehetra izany dia ao anatin'ny Panel Outline. Manaova fanitsiana mazava tsara amin'ny grid, mpitondra, torolàlana manokana, snap-to-grid ary fitaovana fampifanarahana haingana. Mizana, tsy misy fatiantoka kalitao, miaraka amin'ny zooming vector.
Trano fitehirizam-boky - Misafidiana safidy amina endritsoratra an-jatony miaraka amin'ireo Google Fonts.
Page Management - fitantanana pejy mahery, malefaka ary azo ovaina. Tariho ary alatsaho ny pejy handamina indray azy ireo haingana - na handamina azy ireo ao anaty lahatahiry. Afeno ny takelaka na lahatahiry - izay tsy dia vonona loatra amin'ny fotoana voalohany - amin'ny tsindry tsotra amin'ny totozy.
Pejy maoderina - Mitsitsia fotoana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo pejy Master, ary ampiharo ho azy ny fanovana rehetra amin'ireo pejy mifandray aminy.
Atlassian - Moqups dia manana fanohanana fanampiny ho an'ny Confluence Server, Jira Server, Confluence Cloud, ary Jira Cloud.
2 tapitrisa mahery ny olona efa mampiasa Moqups ho an'ny fampiharana sy tranokala prototyping ary wireframing!
Mamorona kaonty Moqups MAIMAIMPOANA
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i Moqups ary mampiasa ny rohy aho mandritra an'ity lahatsoratra ity.
Tags: famolavolana appfampiharana simulationfiaraha-miasateti-dratsyKisarytabilao mikorianamaketymoqupsfitantanana ny vokatraprototypessimulationstoryboarduiuser experienceMpampiasa interfacefijerenafamolavolana fampiharana tranonkalaweb designtariby
Ahoana ny fomba hanombohana fanentanana amin'ny mailaka sonia (ESM) mahomby
Famantarana 7 tsy mila mpizara doka